Zuza i-20% yeKhomishini yokuthengisa kunye nokufumana intlawulo emva kokufumana i-100 yeedola
Ngena okanye ubhalise njengoMdibaniso
Inkqubo yethu simahla ukujoyina. Kulula ukusayina-kwaye akufuneki ulwazi lobuchwephesha. Iinkqubo ezihlangeneyo ziqhelekile kuyo yonke i-Intanethi kwaye zinika abanini bewebhusayithi indlela eyongezelelweyo yokufumana inzuzo kwiiwebhusayithi zabo.
Xa ujoyina inkqubo yethu yobulungu, uya kubonelelwa ngekhonkco le-URL elahlukileyo onokuthi ulibeka ngaphakathi kwiwebhusayithi yakho okanye wabelane nge-imeyile okanye kumaphepha akho eendaba ezentlalo. Xa umsebenzisi ecofa kwenye ikhonkco lakho elikhethekileyo, baya kuziswa kwiwebhusayithi yethu kwaye umsebenzi wabo uya kulandelelwa yinkampani ehambelana nayo. Uya kufumana ikhomishini xa bathe benza naluphi na ukuthenga.
Uhlobo lweKomishini: Intlawulo-ngokuthengiswa kwe-20% kwintengiso nganye oyizisileyo.
Imfuneko yokuhlawula: I- $ 100 USD - Ubuncinci bebhalansi efunekayo ukuze kuhlawulwe.
Ixesha lokuhlawula: Iintlawulo zenziwa kube kanye ngenyanga, kwinyanga edlulileyo.
Zonke ezinye iinkcukacha nceda Qhagamshelana nathi.